Global Voices teny Malagasy » Mihabetsaka Ny Iraniana Mpisipa Miara-Mipetraka Ivelan’ny Mariazy · Global Voices teny Malagasy » Print
Mihabetsaka Ny Iraniana Mpisipa Miara-Mipetraka Ivelan'ny Mariazy
Voadika ny 09 Febroary 2016 7:32 GMT 1	 · Mpanoratra کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران Nandika (en) i Center for Human Rights in Iran, Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Iràna, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Tanora miaraka iray tao an-tampon-kavoana mahatazana an'i Tehran. Sary avy amin'ny ICHRI.
Ity lahatsoratra ity nivoaka voalohany tao amin'ny iranhumanrights.org ary navoaka eto indray ho fiaraha-miasa amin'ny Fanentanana Iraisampirenena Misahana ny Zon'Olombelona ao Iran.
Tamin'ny voalohany izy ireo niantso azy hoe “mariazy fotsy”. Ankehitriny “fiarahana mainty.” Fa na inona na inona anara-petaka ataon'ny manampahefana iraniana amin'itony toe-javatra ironan'ny tanora tsy mpivady miara-mipetraka itony dia mihamaro dia maro ny manao izany.
Fa satria ity toe-javatra ity dia mifandray mivantana amin'ny elanelana misy eo amin'ny lehilahy sy vehivavy Iraniana, hoy ny mpahay fiarahamonina iray tsy nitonona anarana tamin'ny Fanentanana Iraisampirenena Msahana ny Zon'Olombelona ao Iran.
Ohatra, maro kokoa ny olona no misafidy ny hiara-mipetraka amin'ny lehilahy miaraka aminy ivelan'ny fanambadiana ara-dalàna satria tsy mitovy ny sata misy ny lehilahy sy ny vehivavy eo anoloan'ny lalàna Iraniana.
“Maro amin'ny fepetra mipetraka ao anatin'ny fifanarahana ara-panambadiana no manome vahana ny lehilahy,” hoy ilay mpahay fiarahamonina, izay nanokana fahaizany amin'ny fianarana ny vehivavy . “Ny lehilahy no manan-jò bebe kokoa eo amin'ny resaka fisaraham-panambadiana, na eo amin'ny fanondroana ny toerana onenana, sy ny fanaraha-maso izay toerana andehanan'ny vehivavy, ny fanabeazana ary ny asa.”
Tsy manana fahafahana loatra ihany koa ny lehilahy sy ny vehivavy Iraniana hifaneraserana mandritra ny fitomboany noho ny fifanavakavahana eo amin'ny lahy sy ny vavy—napetraka eo amin'ny sehatra ara-pianakaviana sy ara-panjakana—ka ny “mariazy fotsiny” no hita ho fomba ahafahan'ny mpifankatia miaraka ivelan'ny faneriterena apetraky ny fanjakam-birao.
“Izao fomba fiaina izao no ahafahan'ny lehilahy sy ny vehivavy misitraka miaina ambany tafo iray tsy misy fanasarotan-javatra,” indrindra rehefa asehon'ny antotanisa ofisialy  fa maro amin'ny mariazy no miafara amin'ny fisaraham-panambadiana, hoy ny fanazavan'ilay manampahaizana manokana momba izany.
Saingy nampitandrina ilay mpahay fiarahamonina fa mety hampidi-doza ny vehivavy ao Iran, izay efa tsy manan-jò bebe kokoa noho ny lehilahy manoloana ny lalampanorenan'ny Repoblika Islamika ny fandadizana miakatra anoheran'ny governemanta ilay lazaina ho mariazy fotsiny.
“Raha darohan'ny lehilahy miaraka aminy ny vehivavy iray, dia tsy hanana fiarovana araka ny lalàna mihitsy izy,” hoy ilay mpahay fiarahamonina tamin'ny Fanentanana Iraisampirenena Misahana ny Zon'Olombelona ao Iran. “Ho anontanian'ny polisy sy ny manampahefana ara-pitsarana amin'ny sata ara-panambadiana ananany ravehivavy, ka raha tsy manambady ara-dalàna izy, dia ho sahirana tanteraka.”
Koa satria moa tazonina tsiambaratelo tsy ho fantatry ny ray aman-dreny ity fiarahana ivelan'ny fanambadiana ara-dalàna ity, dia tsy marisika loatra ny hitady fanohanana avy amin'ny fianakaviana izy na dia iharan'ny herisetra ara-tsaina sy ara-batana avy amin'ny olona miaraka aminy aza izy.
Eo amin'ny lalàna Sharia Iraniana, dia takiana amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ny hisoratra anarana ho amin'ny fanambadian'izy ireo. Ireo izay misafidy ny tsy hanao izany dia heverin'ny fanjakana ho miaina ao anatin'ny fahotana sy mijangajanga, fandikan-dalàna azo saziana ho faty.
Fa mihamaro ireo tanora Iraniana no misafidy amin'izany toerana mampidi-doza izany.
Rehefa hitan'ny manampahefana ara-panjakana fa manohintohina ny idealy revolisionera izany fironana izany, dia melohin-dry zareo amin'ny teny sy ny asa ilay safidim-pomba fiaina.“Mandrahona tanteraka ny fijotsoana hita amin'ny antotanisan'ny mariazy, ary indrisy, fa maro ny tanora no mizotra mankany amin'ny ‘mariazy fotsy,’ izay aretim-baovao sy mamely mafy ny fianakaviana,” hoy  i Seyed Reza Salehi Amir, izay mpanolotsaina ny Filoha Iraniana Rouhani.
Nanampy izy fa raha ampitahaina ny tamin'ny herintaona dia nihena 6,5% ny mariazy ary nitombo 4,5% ny fisaraham-panambadiana.
“Ny Repoblika Islamikan'i Iran no iray amin'ny fiarahamonina vitsy izay mandeha haingana dia haingana ny fiovana ary tena mampatahotra ny halakin'ny fiovana,” hoy izy.
Ny Klioban'ny Tanora Mpanao Gazety, izay ao anatin'ny fikambanam-pampielezam-peom-panjakana, dia nametraka  ny fitomboan'isan'ny olon-droa tsy mivady amin'ny fisovohan'ny “fahafahana sy ny maoderniten'ny Tandrefana” ao amin'ny fiarahamonina Iraniana.
Ny depioten'ny raharaha ara-kolontsainan'ny Fitsarana dia tsy maintsy mandrisika  ihany koa ny fampitam-baovao “hampitsahatra ity toe-javatra tsy mendrika ity ho ‘mariazy fotsy’ ary tokony hilaza azy ho ‘fiarahana mainty.’”
Nandritra ny asara (andro mafana)-n'ny 2015, dia nanambara  ny governemanta ny hametrahana ny tetikasa “Fampiroboroboana ny Fianakaviana Mitombina” eto amin'ny faritanin'i Tehran, izay nokinendry hiadiana amin'ny “mariazy fotsy” izay fariparitana ho “tsirinkevitra nohafarana tsy mifanaraka amin'ny firindrana sy ny fahasambaran'ny fianakaviana Iraniana.”
Misy mandritra izany fotoana izany ireo mpampianatra eny amin'ny sekoly ambony manopa sy manala baraka ampahibemaso ireo vehivavy misafidy ny hiara-mipetraka amin'ny sipany.
Hitohy hatrany ny fisian'ny vehivavy miditra amin'ny sehatry ny “mariazy fotsy” raha mbola tanora sy tsara tarehy tsara bika ry zareo, hoy ny mpahay fiarahamonina Amanollah Gharaee Moghaddam tamin'ny gazety mpandala ny nentin-drazana Entekhab.
“Avy eo ry zareo dia hivadika ho mpivaro-tena,” hoy izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/02/09/79097/
 antotanisa ofisialy: http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/e-t-sh93.pdf